बुर्तिबाङका सडकले काँचुली फेर्दै, ढलान कार्य तीब्र, डेढ वर्षको काम ३ महिनामै सम्पन्न गरिने ! – ebaglung.com
बुर्तिबाङका सडकले काँचुली फेर्दै, ढलान कार्य तीब्र, डेढ वर्षको काम ३ महिनामै सम्पन्न गरिने !
२०७६ भाद्र २७, शुक्रबार १५:४५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
सुमन सुनार, बुर्तिबाङ २०७६ भदौ २७ । ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिबाङ बजार क्षेत्रभित्रका सडक ढलानको कामलाई पछिल्लो समय तिब्र पारिएको छ ।
नेपाल सरकारको दश नुमना सहरी विकास योजनामा परेको बुर्तिबाङ बजारमा केहि समय यता तिब्र रुपमा ढल निकास सहित बजार क्षेत्रमा पक्की सडक निर्माणको काम भैरहेको छ । बुर्तिबाङ बजारको धौलागिरी चोक देखि बसपार्क हुदै देव चोक सम्मको सडक ढलान गर्ने कार्य सञ्चालन भैरहेको बुर्तिबाङ नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका अशिष्टेन्ट सव–ईन्जीनियर नेत्र चालिसेले ईबागलुङलाई जानकारी दिए । सव–ईन्जीनियर चालिसेका अनुसार बुर्तिबाङ नयाँ सहर आयोजना कार्यालयको २ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमा पक्की सडक निर्माण कार्य भईरहेको छ । ठेक्का प्रकृया मार्फत हिमडुङ एण्ड ठोकर तथा एसी कन्ट्रक्सन बुर्तिबाङले गत साउन ७ गते देखि पक्की सडक निर्माणको काम गरिरहेको सव–ईन्जीनियर चालिसेले बताए ।
हाल सम्म करिव ४५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको हिमडुङ एण्ड ठोकरका प्रतिनिधि तथा एसी कन्ट्रक्सन बुर्तिबाङका प्रमुख दिपक अदैले बताए । धौलागीरी चोक देखि परिवर्तन चोक सम्म २ सय ६८ मिटर सडक ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको उनको भनाई छ । यस्तै बाँकी रहेको परिवर्तन चोक देखि देव चोक सम्म २ सय ५० मिटर सडक ढलानको काम पनि भइरहेको अदैले जानकारी दिए । नयाँ सहरी विकास योजनाको रु. ३ करोड ५० लाख बजेट हो, तर घटिघटाउमा २ करोड २० लाख रुपौयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उनले बताए । १८ महिनामा काम सक्ने ठेक्का सम्झौता भएपनि आउदो असोज मसान्त सम्म ३ महिना भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तिब्र रुपमा काम भैरहेको अदैको भनाई छ ।
बसपार्क देखि माथी प्रभु बैंक रहेको स्थान धौलागिरी चोक सम्म ४ मिटर ४५ सेन्टीमिटर चौडाई रहने गरी सडक ढलान गरिएको छ भने बसपार्क देखि परिर्वतन चोक हुँदै देव चोक सम्म नाली बाहेक ८ देखि साढे ८ मिटर सम्म चौडाई रहने गरी सडक ढलानको काम भईरहेको अदैले बताए । बुर्तिबाङ बजारमा मापदण्ड अनुसार घरहरु निर्माण नभएकाले कतिपय स्थानमा सडक साँघुरो भएकाले घरको पेटी भत्काएर ढलान गर्ने कार्य भैरहेको अदैले जानकारी दिए ।
सडक कच्ची हुँदा बर्षातको समयमा अत्याधिक रुपमा सडक हिलाम्य हुने र हिउँदको समयमा धुलाम्मे हुने भएकाले बुर्तिबाङबासीले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन् । सडक ढलान भएसंगै बजारबासीलाई सहजता हुनुका साथै बजार क्षेत्र समेत सफा र व्यवस्थीत हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नयाँ सहरी विकास आयोजना मार्फत हाल बुर्तिबाङ बजारका विभिन्न स्थानमा ढल निकासका लागि नाली निर्माण, उपल्लो बजारको पुरानो पुलचोक देखि भवरेटा स्थीत सरस्वती प्राथमिक विद्यालय हुदै बरपिपल सम्म सिढी निर्माणको काम चलिरहेको बुर्तिबाङ नयाँ सहर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
कुस्मा-९ ज्ञादीमा रु २ लाख १७ हजार नगद सहित ४ जना जुवाडे पक्राउ, एक जना फरार !
भुजीखोला छैठौँ लघुजलविद्युत आयोजनाको विद्युत सेवा २७ दिन पछि पुनः सुचारु !